မီးခုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ | တစ်ဦးက Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်စိတ်ကို
tag ကိုမော်ကွန်း: မီးခုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
BELAJAR POLA ခုံသုံးလူဖြူစစ်သား
ganifx/ ဇွန်လ 8, 2017/ မီးခုံ/0မှတ်ချက်များ
PATTERN အီရန်မျိုချလွှမ်းမိုးနဲ့အတူ Fibonacci ပေါင်းစပ်
ganifx/ ဇွန်လ 2, 2017/ မဟာဗျူဟာ/0မှတ်ချက်များ
Kali ini kita akan mencoba menggabungkan analisa antara pola candlestick Bullish Engulfing dengan Fibonacci Retacement, ကျွန်တော်ပွင့်လင်းအနေအထားတစ်ခုမဟာဗျူဟာအဖြစ်ရာ၌ခန့်ထားပြီ. Strategi dengan menggabungkan kombinasi antara pola candlestick dengan Fibonacci Retracement ini sebenarnya sangat simple sekali. ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုနေ့စဉ်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်အချိန်ဘောင်အပေါ်ငွေကြေး EUR USD ဖြင့် temuai စကားမစပ် Engufing အီရန်ပုံစံ. Sesuai sifatnya bahwa pola…
Fibonacci နှင့်အတူအညွန့် STAR ပုံစံများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ganifx/ မေ 31, 2017/ Fibonacci/0မှတ်ချက်များ
ဤအခါသမယတွင်, ကျနော်တို့ကတခြားမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံဟာသေနတ်ပစ်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်, Fibonacci retracement နှင့်အတူ. စတားရိုက်ကူးယခင်လမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လမ်းကြောင်းသစ်ဖွင့်ကျဆင်းသွားခံ၏ပုံစံများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Dari bentuk candle yang berwarna merah dan sifatnya sudah jelas bahwa candlestick ini mempunyai bentuk dan sifat yang bearish. Sehingga penarikan fibonacci yaitu dari ujung atas ke bawah. Dalam kasus ini…
ganifx/ မေ 31, 2017/ မီးခုံ, Fibonacci/0မှတ်ချက်များ
SUMMARY DESCRIPTION ခုံ TERBENTUKNYA
ganifx/ မေ 30, 2017/ မီးခုံ/0မှတ်ချက်များ
1. စျေးကွက်အပေါ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ / စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သို့မဟုတ်ငွေကြေးကုန်သည်ဝယ်နှင့်ရောင်းချသူကုန်သည်အကြားရန်ပွဲများ၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်တစ်ခုတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည်. 2. ဖြစ်ပွားခဲ့သည်တဲ့စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုသို့မဟုတ်ငွေကြေး၏စျေးနှုန်း၏တန်ဖိုးအတွက်တိုးလာ, sangat dipengaruhi oleh minat beli dari trader pembeli yang biasanya dikenal dengan istilah Bulls. 3. Sementara untuk penurunan nilai harga suatu saham, dipengaruhi oleh minat jual dari…
THREE ခုံမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံ ( ညနေ STAR )
ganifx/ မေ 28, 2017/ မီးခုံ/0မှတ်ချက်များ
Jika sebelumnya kita sudah mempelajari pola -pola reversal baik dengan formasi satu candlestick maupun dua candlestick, maka sekarang kita akan mempelajari pola reversal lainnya dengan formasi tiga candlestick. မကြာခဏစျေးကွက်ပေါ်သောပယ်ဖျက်ခံရပုံစံတစ်ခုမှာမှ Evening Star ဖြစ်ပါသည်. Pola ini dapat diartkian bahwa apabila muncul Evening Star maka kemungkinan akan terjadi perubahan trend dari trend naik, တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆင်း. အားဖြင့်…
TWO ခုံမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံ ( BEARISH HARAMI )
အလွန်မကြာခဏစျေးကွက်သို့ကြွလာသည်ဟုလမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံ Bearish Harami ပုံစံဖြစ်ပါသည်, pola ini muncul sebagai indikasi perubahan trend naik yang berubah menjadi trend turun . Bearish harami sendiri terdiri dari2ကွဲပြားခြားနားသောမီးခုံ , ပထမဦးဆုံးဒုတိယဖယောင်းတိုင်တစ်အီရန်နှင့် bearish ဖြစ်ပါတယ်. ကိုယ်ပိုင် Harami ဂျပန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုလိုတယ်, yang dapat diartikan formasi kedua candlestick ini mirip seperti ibu…
TWO ခုံမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံ ( BEARISH မျိုချလွှမ်းမိုး )
ကျွန်တော်တက် Trends မှလမ်းကြောင်းသစ်၏လမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံများကိုချဆွေးနွေးတင်ပြပြီးနောက်, ဒါကြောင့်ယခုကျနော်တို့ယခင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ပုံစံကိုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ချ Trends မှထဆွေးနွေးကြမည်, နေဆဲနှစ်ခုခုံပုံစံများ အသုံးပြု.. ပေါ်ထွက်လာကြောင်းအသုံးအများဆုံးမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ပုံစံတစ်ခုမှာ Bearish မျိုချလွှမ်းမိုးဖြစ်ပါသည်. Secara visual pola candlestick Bearish Engulfing ini terdiri dari dua buah candlestick. Candlestick pertama bersifat Bullish dan…
POLA ခုံ DRAGON ပျံသန်း
နဂါး Fly ပုံစံလည်းအတော်လေးအကျွမ်းတဝင် Doji ခုံသောအမျိုးအစားတွင်ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်. နဂါး Fly ခုံအခါအဖွင့်စျေးနှုန်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် , အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုနှင့်ပိတ်ပွဲစျေးနှုန်းနီးပါးတူညီအနေအထားဖြစ်ပါသည် , ဒါပေမယ့်အများကြီးနိမ့်တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်, ကရှည်လျားခုံပုံသဏ္ဌာန်အောအမြီးကနေမြင်နိုင်ပါသည်. ထိုစာနှင့်တူလွင်ပြင်ဒီခုံပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ “T က ”…
ရှည်လျားသောအတော်များများကမျက်စိ Doji စံနမူနာဆီမီးခုံနီးပါးတူညီအရှည်ဖြစ်ကြောင်းထိပ်တန်းနှင့်အောက်ခြေအပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်သည့်အခါဖွဲ့စည်းခဲ့သောပုံစံဖြစ်ပါသည်. ဒီပုံစံဟာဗိုင်းငင်ထိပ်ဆင်တူသည်, လည်းတိုးတက်မှုအတွက်ကုန်သွယ် session တစ်ခုအတွင်းမှာရောင်းချနေသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်စျေးကွက်သင်တန်းသားများကိုများစွာသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပေါ်သည့် Doji ပုံစံကိုထင်ဟပ်. ကြောင်းအလားတူစျေးကွက်များတွင်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးနှစ်ဦးစလုံးမှညွှန်ပြတာရှည်အတော်များများကမျက်စိ Doji ပုံစံ,…